Dhangiiwwan Foormulaadhaan Ramaduu
Dalagaan HAALATA() foormulaa duraan man'ee keessa jirutti dabalamuu danda'a. Fakkeenyaaf, dalagaa AMMEE wajjin, gatii isaa irratti hundaa'uudhaan man'ee halleessuu dandeessa. Foormulaan =...+HAALATA(YOO(AMMEE()>3;"Diimaa";"Magariisa")) haalata man'ee "Diimaa" yoo gatiin irra guddaa 3 ta'e raawwata, ta'uu baannaan haalata man'ee "Magariisa" ni raawwata.
Yoo foormulaa man'eelee bal'ina filatame keessaa hundatti rawwachuu barbaadde, qaaqa Barbaadii & Bakkabuusi fayyadamuu dandeessa.
Maadheelee feete hunda filadhu.
Ajaja baafataa Gulaali - Argachuu & Bakka buusuu filadhu.
".*" himannoo sirraawaa kan qabayyeewwan maadhee ammee agarsiisuu dha.
Dirreewwan Himannoowwan sirraawaa fi Filannoo ammee qofa mallattoo itti godhi.Hunda Argadhu cuqaasi.
Maadheeleen hundi kan qabiyyeewwan isaanii filannoo keessa gale amma ni shoolamu.
Lakkoofsota Negaatiivii Shooluu
Title is: Dhangiiwwan Foormulaadhaan Ramaduu